Antenimierampirenena : fanamafisam-pahefana ny fiketrehana fitsipaham-pitokisana | NewsMada
Antenimierampirenena : fanamafisam-pahefana ny fiketrehana fitsipaham-pitokisana
Hafahafa, tsy ampoizina… Ny mpomba ny fitondrana indray izao no mitarika ny fanangonan-tsonia hahazoana manao fitsapaham-pitokisana ny governemanta. Voalaza ho anisan’ny anton’izany ny tokony hanamafisana ny fanohanana ny fitondrana sy hametrahana amin’ny toerany izay tena manohana ny filoha, amin’izao ankatoky ny fifidianana izao.
Mety ho vahaolana amin’izany ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta? Ny marimarina kokoa: ny Praiminisitra. Misy mifampisintona ny eo amin’ny fahefana mpanatanteraka sy mpanao lalàna. Misy toy izany koa na ny samy mpanohana ny fitondrana aza, fa ao, ohatra, ny efa nahazo ny fiara 4 x 4, ka maharatsiratsy fijery ny sasany.
Tsy mazava sy tsy fantatra be ihany izay tena fototry ny fanangonan-tsonia hahazoana manao fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Mandeha koa ny tsilian-tsofina ny tsy fahombiazan’ny governemanta amin’ny fiatrehana ny olana mahazo ny vahoaka: tsy fandriampahalemana, pesta, fidangan’ny vidim-piainana…
Misy ny ady tombontsoa… mifanohitra
Amin’izany, misy manombana fa te hanala ny Praiminisitra ny filoha, fa tsy te ho tompon’antoka mivantana. Noho ny ady tombontsoa mifanohitrra, ohatra? Na ifanaovana takalon’aina amin’ny tsy mety atao… Izay no mahatonga ny hoe hafahafa fa ny mpomba ny fitondrana indray no mihetsika hanao fitsipaham-pitokisana.
Tena ady sa sarin’ady fifampitsapana hery sy famolahana? Tsy sahy manala ny Praiminisitra ve ny filoha? Tsy raisina ny tsy fankasitrahana ny governemanta amin’ny alalan’ny latsabato fitsipaham-pitokisana, raha tsy ny antsasaky ny mpikamban’ny Antenimierampirenena no manao sonia azy, araka ny And. 103 amin’ny lalàmpanorenana.
Tsy lany ny fitsipaham-pitokisana, raha tsy ny roa ampahatelon’ny depiote no mankato azy. Ho tratra ve ny fetr’isa? Paipaika sy kajikajy politika ny amin’ny hoe fanamafisana ny fanohanana ny filoha ny raharaha, fa tsy fikatsahana izay tena tombontsoam-bahoaka izay heverina fa hampiombona ho azy ny rehetra raha misy ny fitiavan-tanindrazana.
Hitondra inona amin’ny vahoaka izay fitsipaham-pitokisana, raha ireo hoe solom-bavany no efa tsipahiny fa tsy atokisany intsony ny sasany… tsy manao afa-tsy paipaika sy kajikajy politika ho azy?